Weerar dhimasho & dhaawac badan dhaliyey oo saaka ka dhacay magaalada Gaalkacyo – SBC
Weerar dhimasho & dhaawac badan dhaliyey oo saaka ka dhacay magaalada Gaalkacyo
Posted by editor on Juun 8, 2011 Comments
Ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyootey 19 kalena dhaawacyo kala duwan ayaa ka soo gaarey weerar hubaysan oo koox dabley hubaysan ay ka gaysatey magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, weerarkaasi oo la aaminsan yahay in uu salka ku hayo weerar caynkan oo kale ah oo in ka badan 14 qof lagu laayey.
Wariyaha SBC ee magaalada Gaalkacyo ayaa soo sheegaya in weerarkan oo ka dhacay agagaaraha Hotel Embassy ee Koonfura magaalada Gaalkacyo dadka ku dhintey & kuwa ku dhaawacmayba u badan yihiin dad waayeel ah oo ka soo baxay Masaajiyada deegaankaasi oo ku soo tukudeen salaadii subax.
Weerarkan oo dhacay hiirtii waaberi ayaa lala eegtay dadka dhintey & kuwa dhaawaca ah oo ku sugnaa goob maqaaxi ah oo ay ku qaxweynayeen.
Dableyda weerarka geysatey oo watey baabuur isla markaana la sheegay inay ka soo gudbeen dhanka waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa rasaas aan loo meel dayin ku ekeeyey dadkii goobta fadhiyey.
Dadka dhaawaca ahaa oo qaarkood dhaawacoodu halis yahay ayaa la soo sheegayaa in loola cararey Isbitaalka ay maamusho hay’ada MSF ee ku yaal Koonfurta magaalada Gaalkacyo, wariyaha SBC oo booqdey Isbitaalkaasi ayaa soo sheegaya in Isbitaalka ay buuxdhaafiyeen ehelada dadka weerarkaasi ku dhintey & kuwa dhawaacmey, iyadoo dhakhaatiirtu u sheegeen wariyaha in xaalad qatar ah ay ku sugan yihiin dadka dhaawaca ah qaarkood, kuwaasi oo rasaastu ka heleeshay xubno muhiim ah oo ka mid ah jirkeyga.
Weererkan ayaa la xiriira ama daba socda weerar caynkan oo kale ah oo lagu xasuuqay dad safar oo la socdey gaari kaasi oo maleeshiyo hubaysan ay rasaas aan loo aaba yeelin ku afuufeen, iyadoo isla goobtaasi ay ku geeriyoodeen in ka badan 10 qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
Weerarkaasi oo ka dhacay duleedka tuulada Bali Busli ayaa dadka safarka ah ee lala beegsadey weerarka waxay ka ambabaxeen magaalada Gaalkacyo waqooyigeeda iyagoo kus ii jeeday degmada Jariiban.
Xaalada magaalada Gaalkacyo ayaa saaka kacsan waxaana laga dareemayaa dhaqdhaqaaq hubaysan, waxaana laga cabsi in ay dhacaan falal kale oo la xiriira aanooyin & aargoosi.
Maamulka Galmudug waxay cambaareeyeen weerarkii lagu xasuuqay dadkii rakaabka ahaa ee gaariga safarka ah la socdey, sida uu saxaafada u sheegay afhayeenka maamulkaasi Axmed Baasto.
Juun 8, 2011 at 8:54 am
walaahi waa wax laga xumaado waa arrin fool xun waana wax u horseedi kara in shakhsi kasta oo qaato qori yar iyo weyn waayo waxa iswaardiyeen jirey waa mas’uuliyiinta xilalka haysa , laakiin hadda waxa ay noqonaysaa in caruurta yar yar iyo waayeelada la yiraahdo qorya qaata taasna waa musiibo.
Ilaahow kala qabooji wixi dhibka wadana ummadda ka qabo.
soomaaliya cidna uma maqna ceelna uma qodna.